‘यो सरकार कम्युनिस्ट होइन, यी कम्युनिस्ट नेता पनि होइनन्’ – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Political Views/‘यो सरकार कम्युनिस्ट होइन, यी कम्युनिस्ट नेता पनि होइनन्’
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनका शिखर पुरुष हुन् मोहनचन्द्र अधिकारी । हालका कम्युनिस्ट पार्टीका अग्रज र गुरु मानिने अधिकारी वर्तमान सरकार र सरकारको नेतृत्वकर्ता दलका नेताहरुमा अलिकति पनि कम्युनिस्ट चरित्र नभएको बताउँछन् । नेतृत्वमा कम्युनिस्ट चरित्र भए जनताले यस्तो दुःख नपाउने उनको भनाइ छ ।
नेपालका नेल्सन मण्डेला भनेरसमेत चिनिने अधिकारीले राजनीतिक मु`द्दामा झण्डै १७ वर्ष जेल जीवन बिताएका थिए । तर लामो समय आफू संल`ग्न रहेको पार्टी अहिले सरकारमा भए पनि अधिकारीलाई वर्तमान सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को काम गराई पटक्कै चित्त बुझेको छैन । उनी भन्छन्, ‘यो कम्युनिस्ट सरकार होइन, नेताहरु कम्युनिस्ट पनि होइनन् ।’
किन त ? भन्ने प्र`श्नमा उनको छोटोे जवाफ छ, ‘जनताप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी नभएपछि नाम राख्दैमा कम्युनिस्ट हुँदैन ।’प्रस्तुत छ, उनै शिखर पुरुष अधिकारीसँग वर्तमान कम्युनिस्ट नेतृत्को सरकार र सरकारले गरेका काम कारवाहीबारे गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :
दिनहरु कसरी बिताउँदै हुनुहुुन्छ ?
घरमै बसिरहेको छु । अध्ययन गर्ने, पत्रपत्रिका र टेलिभिजन हेरेर समय गइरहेको छ । अहिले त फेरि लकडाउनको समय छ, बाहिर निस्कने कुरा पनि हुँदैन ।मैले यो सरकारलाई कम्युनिस्ट सरकार भनेको छैन । यो सरकारमा रहेको पार्टीलाई कम्युनिस्ट पार्टी पनि म भन्दिनँ । त्यसैले यो कम्युनिस्ट सरकार पनि होइन, यिनीहरु कम्युनिस्ट पनि होइनन् । यदि मुलुकमा कम्युनिस्ट सरकार भएको भए कोरोनाको महा`मा`री हुँदा जनतालाई पाल्नु पर्दैन ? भोट मा`ग्ने बेलामा चाहीँ जनताको सेवा गर्छु भ`न्ने अनि जनता अहिले समस्यामा पर्दा केही नगर्नेलार्ई कसरी कम्युनिस्ट र कम्युनिस्टको सरकार भन्नु ?
समाचारहरु हेर्दा र पढ्दा कस्तो लाग्छ ?
जनताले दुःख पाएका छन् । कोरोनाको महामारी छ । कोही विदेशमा अड्किएका छन् । कोही स्वदेशमै अलपत्र छन् । सरकार प्रभावकारी भएन । आफ्ना जनता`प्रति सरकारले जिम्मे`वारी पुरा गरेन ।अहिले त मुलुकमा कम्युनिस्ट सरकार छ । कम्युनिस्ट सरकार त जनताप्रति बढी जिम्मेवार र जनउत्तरदायी हुनुपर्ने होइन र ?
मैले यो सरकारलाई कम्युनिस्ट सरकार भनेको छैन । यो सरकारमा रहेको पार्टीलाई कम्युनिस्ट पार्टी पनि म भन्दिनँ । त्यसैले यो कम्युनिस्ट सरकार पनि होइन, यिनीहरु कम्युनिस्ट पनि होइनन् । यदि मुलुकमा कम्युनिस्ट सरकार भएको भए कोरोनाको महामा`री हुँदा जनतालाई पाल्नु पर्दैन ? भोट मा`ग्ने बेलामा चाहीँ जनताको सेवा गर्छु भन्ने अनि जनता अहिले समस्यामा पर्दा केही नगर्नेलार्ई कसरी कम्युनिस्ट र कम्युनिस्टको सरकार भन्नु ?
तर उनीहरु (सत्तारुढ दल) आफुलाई कम्युनिस्ट भन्न रुचाउँछन् । यसमा तपाईको भनाइ के छ ?
उनीहरुले कम्युनिस्ट र कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार त भन्छन्, तर बास्तविकता त्यो होइन ।
कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार कस्तो हुनुपर्ने हो तपाईको विचारमा ?
कम्युनिस्ट सरकारले जनताको सेवा गर्ने हो । कमसे कम जनताको गाँस, बास र कपासको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने हो । यो सरकारले ती काम गर्न सकेन । ला`खौँ जनता विदेशमा छन् । ती कोरोना भाइरसको जोखिममा छन् । कति त मरिसकेका पनि छन् । उनीहरुप्रतिको दायित्व खोई ? त्यसैले यो सरकार बुर्जुवा सरकार हो । यिनीहरुले कम्युनिस्ट सिद्धा`न्त र विचार पोलेर खाइसके ।
भनेपछि काँग्रेस सरकारले जति पनि काम गरेन भन्ने तपाईको गुनासो हो ?
सबै काँग्रेसले लिएको नीति यिनीहरुले अनुसरण गरेका छन् । काँग्रेस अहिले प्रतिपक्षमा छ तर अब काँग्रेस पनि रहने हो वा होइन भन्ने भइसकेको छ ।
म रहे सम्म नेकपालाई विभा जनको दिशामा जान दि`न्नँ – माधव नेपाल
भारतलाई ठुलो झ’ट्का दिदै चीनले नेपाललाई दियो यस्तो खुशीको खबर !